ရှညောသား: တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဒီလိုလေးနဲ့ပဲညစာစားရတယ်...
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, February 15, 2013 Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဆရာ ကြိုးစားထာ။။ ခင်မင်လျက် အံ့ထက်
အခု ကျွန်တော် ဆရာထွန်းအဆောင်ရောက်နေတယ်။ RC2က ခပေါင်းဆောင်မှာ။ အဆင်ပြေလား? ဆရာထွန်းကလဲ ဆရာကိုမေးနေတယ်။ Bye Bye. ခင်မင်လျက် အံ့ထက်
၀ိတ်ချမလို့ကြံနေတာ အခုမှပဲ ဓာတ်စာကောင်းတွေ့ရတော့တာကိုးး)